Venerable Kusalasami: December 2010
မေဂျီခေတ်ရဲ့ အစောပိုင်းကာလတွေမှာ အောာင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ နပန်းသမားတစ်ယောက် ရှိခဲ့တယ်။ သူ့နာမည်က လှိုင်းလုံးကြီး “အိုနမိ”လို့ ခေါ်တယ်။ အိုနမိဟာ အလွန်ကို သန်မာထွားကြိုင်းတယ်။ နပန်းသတ်ပွဲပညာကို ကောင်းကောင်းကြီး နားလည်သဘောပေါက်တယ်။ သူဟာ နပန်းလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာ အလွန်ကြိုးစားသူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီအခါမျိုးတွေဆို သူ့ဆရာကိုတောင် အနိုင်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ခက်တာက လူရှေ့သူရှေ့မှာဆို မစွံတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူက အလွန်ရှက်တတ်တယ်လေ။ လူရှေ့သူရှေ့ဆို သူ့တပည့်တွေက ကိုင်ပေါက်တာတောင် ခံရတယ်။
တစ်နေ့တော့ အိုနမိဟာ ဇင်းမာစတာတစ်ဦးထံ အကူအညီသွားတောင်းဖို့ စိတ်ကူးရတယ်။ နေရာအတည်တကျ မနေတဲ့ ဟကုဇု (Hakuju)လို့ခေါ်တဲ့ ဇင်းမာစကာတစ်ယောက် အနီးအနားက ကျောင်းသေးသေးလေးမှာ ရောက်လာတယ်။ ဒါနဲ့ အိုနမိလည်း သူ့ဆီကို သွားပြီး သူ့မှာ ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာကြုံနေရကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်။
ဟကုဇုက “လှိုင်းလုံးကြီးဆိုတာ မင်းနာမည်နော်၊ ဒီလိုဆို ဒီည ဒီကျောင်းမှာ နေပါ၊ မင်းကိုယ်မင်း လှိုင်းလုံးကြီးလို့ စိတ်ကူးထားပါ၊ မင်းကိုယ်မင်းလည်း အလွန်(ရှက်)ကြောက်တတ်တဲ့ နပန်းသမားမဟုတ်တော့ဘူးလို့လည်း နှလုံးသွင်းပါ။ အိုနမိဆိုတဲ့ လှိုင်းလုံးကြီးဟာ သူ့ရှေ့မှာ ရောက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကို တိုက်ခိုက်သယ်ဆောင်သွားတယ်၊ သူ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကို ၀ါးမျိုသွားတယ်လို့လည်း စိတ်ကူးပါ၊ ကဲ … အခု ငါပြောတဲ့အတိုင်း လုပ်ပါ၊ ဒီလိုဆို မင်းဟာ ဒီမြေမှာ အကြီးကျယ်ဆုံး နပန်းသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်”လို့ အကြံပေးပြီး အနားယူသွားတယ်။
အိုနမိဟာ သူ့ကိုယ်သူ လှိုင်းလုံးကြီးတွေလို သဘောထားဖို့ တရားထိုင်လိုက်တယ်။ ပထမတော့ အမျိုးမျိုး တွေးဖြစ်နေတယ်။ (လှိုင်းလုံးကြီးအဖြစ် အာရုံစုလို့ မရဘူး။) တဖြည်းဖြည်းနဲ့မှ သူ့ကိုယ်သူ လှိုင်းလုံးကြီးအဖြစ် စိတ်ကူးထဲမှာ ပြောင်းလဲပစ်လို့ ပိုပိုပြီး ရလာတယ်။ ညဥ့်နက်လာလေလေ လှိုင်းလုံးကြီးက ကြီးလာလေလေ။ လှိုင်းလုံးကြီးက ပန်းအိုးထဲမှ ပန်းတွေကို လွင့်သွားစေတယ်။ နောက်ဆုံး ဘုရားခန်းက ဘုရားဆင်းတုကိုတောင် ရေလွှမ်းသွားတယ်။ အရုဏ်မတက်ခင်လေးမှာ ကျောင်းလေးဟာ အကုန်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ ကျောင်းလေးနေရာမှာ အပြောကျယ်လှတဲ့ ပင်လယ်လှိုင်းတွေ အတက်အကျ ဖြစ်နေတာပဲ ကျန်တော့တယ်။
မနက်မိုးလင်းတော့ ဇင်းမာစတာကြီးဟာ သူတရားထိုင်နေတာကို တွေ့ပြီး ခပ်ဆဆလေး ပြုံးလိုက်တယ်။ နပန်းသမားရဲ့ ပုခုံးကိုလည်း ညင်ညင်သာသာ ပုတ်လိုက်တယ်။ ပြီးမှ “ကဲ … အခု မင်းကို ဘယ်အရာကမှ နှောက်ယှက်လို့ မရတော့ဘူး၊ မင်းဟာ လှိုင်းလုံးကြီးဖြစ်တယ်၊ မင်းရှေ့ရောက်လာတဲ့အရာမှန်သမျှကို ဖြိုလှဲပစ်တော့မယ်”လို့ ပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီနေ့မှာပဲ အိုနမိဟာ နပန်းပွဲတစ်ခုကို ၀င်ပြိုင်ပြီး အနိုင်ရခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်း ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အိုနမိကို နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တဲ့သူ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ဘူး။
လင်္ကာက စကားဝိုင်းလေးက မလေးရှားရောက်တော့ ရပ်သွားတယ်။ အခုတော့ မလေးရှားမှာ ဒီအကြောင်းလေး စပ်ပြီး လူငယ်လေးတွေကို ပြောဖြစ်တယ်။ ဒီပုံပြင်လေးကို ပြောပြတော့ သူတို့ကလည်း စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်။
“နည်းနည်းတော့ အလှမ်းဝေးသလိုပဲ၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ယုံကြည်မှုသာရှိရင် အရာရာကို စွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြနေသလိုပဲ”လို့ တစ်ယောက်က ဆိုသည်။ အခြားသူများကလည်း ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နဲ့ သဘောတူကြပုံရပါတယ်။ “ဟုတ်တယ်၊ ကိုယ့်လူပြောတာ မှန်တယ်။ ကိုယ်လည်း ဒီလိုပဲ ယူဆမိတာပဲ။ ဟိုနေ့က မြန်မာအသင်းကန်တဲ့ ဘောလုံးပွဲ တွေ့တယ်မလား။ မြန်မာအသင်းကစားသွားတာ။ ဘေားလုံးအနှုတ်အသိမ်းတွေက အရင်ကထက်တော့ နည်းနည်းသာလာသလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘာဗျူဟာမှ ကောင်းကောင်းမရှိဘူး။ နောက်ပြီး နိုင်ကို နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှု မရှိဘူး။ ဒါက အရေးကြီးတာပဲ။ နောက်ဆုံး ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲဆို ယုံကြည်ချက်နဲ့ပေါင်းပြီး ကြိုးစားကြရင် နိုင်မှာပဲ။ စင်္ကာပူနဲ့ပွဲလည်း ဘာထူးလဲ။ ဒီနှစ်စင်္ကာပူဟာ ဘာမှ ခြေစွမ်းရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့စိတ်ထဲမှာ သိမ်ငယ်နေကြသလိုပဲ။ ဘာသတ္တိမှ မရှိဘူး။ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဇွဲနပဲ မရှိကြဘူး။ ဒါကြောင့်အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကြတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီဝတ္ထုထဲမှာလည်း နပန်းသမားကြီးဟာ အစွမ်းအစရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ နောက်ဆုံး ယုံကြည်ချက် ရှိသွားတာနဲ့ သူ့အစွမ်းအစတွေက ပေါ်ထွက်လာတာပဲ မဟုတ်လား”
“ကိုယ့်လူတို့ ပြောမှ ဒို့ အတန်းထဲက ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို သတိရမိတယ်။ သူက မြန်မာကနေ လာတာ။ သူ့အရည်အချင်းက အရမ်းတော်တယ်။ ဒါပေမယ့် အတန်းထဲရောက်တာနဲ့ ရှက်ကိုးရှက်ကန်း ဖြစ်နေတာ။ သူ့မှာရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ထုတ်မပြနိုင်ဘူး။ ဒါက သူ့မှာ ယုံကြည်ချက်လေးတစ်ခု ချို့တဲ့နေလို့ပဲ ဖြစ်ရမယ်”လို့ သူတွေ့ကြုံရသော ကောင်မလေးအကြောင်းကို ပြောပြနေခဲ့တယ်။ “မင်းပြောတာ ဟုတ်တယ်။ ဒို့တွေ နေ့စဉ်တွေ့နေရတာပဲလေ။ လူတော်အချို့ဟာ လူကြားထဲမှာ ရှက်တတ်တာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုမရှိတာနဲ့ တော်ပေမယ့် ကျော်သူ ဖြစ်မလာကြဘူး။ အချို့ဆိုရင် သိပ်ပြီး တော်တာတတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိတာနဲ့ လုပ်ရဲကိုင်ရဲရှိတော့ ရှေ့တန်းကို ရောက်သွားကြတာ။ တကယ် တော်ဖို့တတ်ဖို့လည်း လိုအပ်သလို သတ္တိရှိရှိ၊ ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ဖို့လည်း အရမ်းလိုတယ်”လို့ တစ်ယောက်က ထောက်ခံပေးနေတယ်။
သူတို့စကား ဆုံးသွားသောအခါ ကိုယ်က ဇာတ်လမ်းထဲက နပန်းသမားကြီးအဖြစ်ကို ပြန်ကောက်ပြီး အမြင်လေးတွေ ချပြမိခဲ့တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာအရဆိုလျှင် နပန်းသမားကြီးဟာ သမထလမ်းစဉ်နဲ့ သူ့ရဲ့ ကြောက်စိတ်၊ ရှက်စိတ်ကို အနိုင်ယူလိုက်တာပဲ။ ကုစားလိုက်တာပဲ။ အရာရာမှာ စိတ်ဆောင်ရင် အောင်နိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီမှာ ဒို့အနေနဲ့ သတိထားသင့်တာက အရည်အချင်းနဲ့ အဲဒီအရည်အချင်းကို လက်တွေ့ကျကျ အသုံးချတတ်ဖို့ပဲ။ အရည်အချင်းတွေတော့ ရှိပါရဲ့၊ လူကြားထဲမှာ အများသိအောင် ထုတ်ဖော်ဖို့ ယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင် အလကားပဲ။
ထိုစကားဝိုင်းလေးအဆုံးမှာ လူငယ်များအနေဖြင့် ပထမဦးဆုံး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အရည်အချင်း ပြည့်ဝအောင် အားထုတ်သင့်ကြောင်း၊ ပြီးလျှင် ကိုယ်ဆည်းပူးဖြည့်တင်းထားတဲ့ အရည်အချင်းကို လောကကောင်းကျိုးအတွက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးချလုပ်ဆောင်ဖို့လိုကြောင်း တိုက်တွန်းစကားလေး ပြောခဲ့မိပါတယ်။
Posted by ashin kusalasami on December 29, 2010 1 comment:
သူမကို စမြင်လိုက်တော့ ကျွန်တော်က သာမန်လူတစ်ယောက်လို့ပဲ မြင်လိုက်မိသည်။ နောက်ပိုင်း အနီးကပ်သေချာပေါင်းကြည့်သောအခါ သူမသည် တကယ့်သာမန်လူယောက်ကဲ့သို့ ထူးဆန်းသောလူတစ်ယောက် ဖြစ်နေလေသည်။ သူမသည် လူတစ်ယောက်လို စားပါသည်။ လူတစ်ယောက်လို သွားပါသည်။ လူတစ်ယောက်လို စကားပြောပါသည်။ သူမက လူတစ်ယောက်လို ပီပီသသကြီး နေလေလေ ကျွန်တော်က တကယ့်ကို အံ့ဖွယ်သာမန်လူတစ်ယောက်လို ထင်မိလေဖြစ်ပါသည်။ သူမနှင့်တွေ့စဉ်က မိုးတွေ အရမ်းရွာနေခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ကောင်းကင်က ကြည်လင်သန့်ရှင်းနေသည်။
သူမသည် အရာအားလုံးကို တစ်ယောက်ယောက်က ဖန်ဆင်းထားတယ်ဆိုသော ၀ါကျကို မကြိုက်ပါ။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်သာ ဖန်ဆင်းတယ်ဆိုသော ၀ါကျကို ကြိုက်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အိမ်က အမွေးစုတ်ဖွား ခွေးဖြူလေးကို သူမကိုယ်တိုင် ဈေးက ၀ယ်လာပြီး မွေးထားသောကြောင့် ဖြစ်လေသည်။ အားလပ်သည့်အချိန်တိုင်း ထိုကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်ရသော သို့မဟုတ် ထိုအဓိပ္ပာယ်နှင့်ဆင်တူသော စကားများကို ဖုန်းဆက်ကာ ပြောပြတတ်လေသည်။ သူမသည် မြသန်းတင့်၏ မယာဘုံကို နှစ်သက်သလို မာယာကော့စကီး၏ ဘောင်းဘီဝတ်မိုးတိမ်ကိုလည်း ကြိုက်ပါသည်။ “ဖြစ်နိုင်ရင် အမှန်တရားနဲ့ နီးစပ်ချင်တာပဲ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ဘာတစ်ခုမှ မဖြစ်ချင်ပါဘူး”ဟု မကြာခဏ ပြောတတ်ပါသည်။ သူမဆီက ထိုစကားများကို ကြားရသောအခါတိုင်း သူမသည် ခါတိုင်းထက် ပိုကြည်လင်တောက်ပနေတတ်ပါသည်။
တစ်နေ့က လူတစ်ယောက်က ကမ္ဘာကြီး ပူနွေးလာမှုနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို ပြောနေသည်။ နောင်နှစ်ပေါင်း ၁-သန်းခန့်ရှိလျှင် ကမ္ဘာကြီး ပျက်စီးလာနိုင်သဖြင့် စိုးရိမ်မိပါကြောင်း ပြောနေသည်။ လူအများက နားထောင်နေရင်း မနက်ဖြန်သဘက်ခါပဲ ကမ္ဘာပျက်တော့မလို စိုးရိမ်စိတ်များ ၀င်နေပုံရသည်။ သူမက ဘေးကနေ သာမန်လူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ ပြုံးနေပြီး သာမန်လူတစ်ယောက်လို ရယ်မောနေပါသည်။ သူမပါးစပ်က “နောင် နှစ်ပေါင်း ၁-သန်း၊ ဟုတ်လား”ဟု တဖွဖွ ပြောရင်း ရယ်နေသည်။ ရယ်နေရင်း သူမမျက်လုံးများက စကားဝိုင်းကလူတွေ လက်ထဲက ကြွပ်ကြွပ်အိတ်များကို ငေးနေသည်။
တစ်နေ့က သူမသည် အော့ချဝစ်လမ်းထဲ လျှပ်တပြက် ချိုးကွေ့ဝင်လိုက်သည်။ အမှိုက်ပုံမှာ အစာစားနေတဲ့ လမ်းဘေးခွေးတစ်ကောင်က ဖျက်ခနဲ လမ်းပေါ်တက်လာလိုက်တော့ ကားတစ်စီးနှင့် တိုးတိုက်မိသည်။ ကားကို ဘရိတ်အုပ်လိုက်သော်လည်း နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။ လူတွေအများကြီး ၀ိုင်းကြည့်နေကြသည်။ သူမလည်း ကားပေါ်က ဆင်းလိုက်သည်။ ကားအောက်တွင် သွေးသံတရဲရဲနှင့် လဲလျောင်းနေသော ခွေးလေးထံမှာ သူ့အကြည့်တွေ စိုက်ဝင်သွားသည်။ ကားနောက်ခန်းထဲက ဆာလာအိတ်ကို ထုတ်လိုက်သည်။ ခွေးလေးကို ထည့်သွားပြီး မြို့ပြင်သို့ မောင်းသွားခဲ့သည်။ ကားမောင်းနေရင်း သူမစိတ်ထဲတွင် “မောင်ကံဆိုးလေးပဲ”ဟု ရေရွတ်ရင်း ခွေးလေးကို “မောင်ကံဆိုးလေး”လို့ အမည်ပေးလိုက်သည်။ လူတွေက သူမကို ထူးဆန်းသလိုလို အကြည့်များနှင့် ၀ိုင်းငေးနေခဲ့ကြသည်။ သူမကို “အတော်ထူးဆန်းတဲ့ ကောင်မလေးပဲ”ဟု ကောက်ချက်ချနေခဲ့ကြသည်။
ကျွန်တော်သည် သူမလို သာမန်လူတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ရတာ အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ နေ့စဉ်ဘ၀များတွင် အကာသက်သက် ပကာသနများနှင့် ဘောင်းဘီဝတ်ထားသော မိုးတိမ်များကိုသာ တွေ့မြင်နေရသည်။ မြေပြင်တွင် လမ်းလျှောက်ကြသူများဖြစ်သည့်အတွက် ဖိနပ်များ ခြေထောက်တွင် စီးကြခြင်းကို စောဒက မတက်လိုသော်လည်း နူးညံ့သော ကော်ဇောကြီးများပေါ် ဖိနပ်စီး လမ်းလျှောက်တတ်သော သတ္တ၀ါများအကြောင်းကိုတော့ ခေါင်းရှုပ်ခံ မစဉ်းစားမိဖို့ အတော်ကြိုးစားခဲ့ရပါသည်။ သူမသည်ကား ၂၁-ရာစု၏ သမီးပျိုမဟုတ်သလို ၂၁-ရာစု၏ အလှများလည်း မရှိပါ။ သို့ရာတွင် သူမအသက်သည် ၂၁-နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်တော့ သူမသည် ဘာမှ မဟုတ်ပါ။ သူမအနေဖြင့်လည်း သူမသည် ဘာမှ မဟုတ်သည့်အတွက် အလွန်ဂုဏ်ယူကြောင်း မကြာခဏ ပြောနေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျွန်တော်သည် သူမကို သာမန်လူတစ်ယောက်လို အထင်ကြီး လေးစားမိခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် ကျွန်တော်တို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ကြည့်မိတိုင်း အမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့သာ အနိုင်ရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အမှန်တရားအကြောင်း သုံးသပ်ပြောဆိုကြတိုင်း အမြဲတမ်း ကျွန်တော်တို့ကသာ မှန်ကန်ကြောင်း ကောက်ချက်ချကြသည်။ သူသည် “အမှန်တရားသည် ဘယ်တော့မှ မမှား”ဆိုသော စကား၏ စက်ဆုပ်စရာကောင်းမှုကို စဉ်းစားနေမိသည်။ အမှန်က အမှန်များအားလုံးသည် မှားနိုင်သလို အမှားများအားလုံးသည်လည်း မှန်နေနိုင်ပါသည်။ အမှန်အချို့သည် မှားနေနိုင်သလို အမှားအချို့သည်လည်း မှန်နေနိုင်ပါသည်။
သူမသည် မာရီနာဘေးက တိုးတိုးညှင်းညှင်း လှိုင်းခတ်သံကို ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် နားဆင်နေတတ်သလို စိတ်တည်ကြည်ဖြောင့်မတ်မှုလမ်းစဉ် သတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကိုလည်း နေ့စဉ်မပြတ် အားထုတ်တတ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လေသည်။ “မာရီနာဘေးက လှိုင်းပုတ်တဲ့အသံလေးက သိပ်နားထောင်လို့ ကောင်းတာပဲ”လို့ မကြာခဏ ပြောနေတတ်သလို “နှာသီးဖျားမှာ တိုးဝှေ့သွားတဲ့ လေတိုးသံလေးက အားမာန်အပြည့်ရှိလိုက်တာ”လို့လည်း ရေရွတ်နေတတ်ပါသည်။
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရသော ဘ၀များကို ကံဆိုးခြင်းနှင့် ကံကောင်းခြင်း တစ်ခုခု အမည်တံဆိပ် ခတ်နှိပ်ဖို့ မလိုအပ်ဟု ခံယူမိလာသောအခါမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်၏ လေးနက်မှုက ခန့်ငြားလှသည်။ သူမသည် ပုံပြင်ထဲက နတ်ဘုရားမတွေလိုတော့ မဟုတ်ပါ။ သို့ရာတွင် ထိုထက် လက်တွေ့ဆန်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လေသည်။ သူမမျက်လုံးများသည် တောက်ပလင်းလက်နေသည်။ သို့ရာတွင် တည်ကြည်သည်။ လေးနက်သည်။ သူမ၏ ကြည်လင်လေးနက်သောအကြည့်များမှ တစ်ဆင့် နှလုံးသား၏ အေးချမ်းထည်ဝါမှုကို မြင်ရသည်။ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော ရိုးသားမှုက ပျံသန်းတော့မည့် သိန်းငှက်တစ်ကောင်လို အားမာန်အပြည့် ရှိလှသည်။
မှတ်ချက်။ ။ (စာဖတ်သူများ !) စာထဲက သာမန်လူက ဘယ်သူလဲလို့ မမေးစေချင်ပါ။ ထိုသာမန်လူသည် သင်လည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကျွန်ုပ်လည်း ဖြစ်နိုင်လေသည်။ အရာအားလုံးလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဘယ်သူမှ မဟုတ်ဘဲလည်း ဖြစ်နေနိုင်လေသည်။
Posted by ashin kusalasami on December 22, 20102comments:
ပန်းတွေ ပွင့်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းတွေ ညှိုးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကောင်ကင်ယံတစ်ခုလုံး သာယာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိုးတိမ်တွေ အုံ့ဆိုင်းနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြည့်များနှင့်သာ မြင်နိုင်လေသည်။ ထိုအကြည့်များကို သင့်နေ့စဉ် ဘ၀များတွင် တွေ့နိုင်သလို သင့်မျက်ဝန်းများတွင်လည်း ထိုအကြည့်များ ရှိနေနိုင်ပါသည်။ အကြည့်များ၏ ရိုက်ခတ်မှုကို သင်ခံရဖူးသလို သင့်မျက်ဝန်းမှ အကြည့်များ၏ ရိုက်ခတ်မှုကိုလည်း အခြားသူများ ခံစားနေရနိုင်ပါသည်။
မိုးလင်းပြီဆိုသည်နှင့် သင့်မျက်ဝန်းကို သင် ဆေးကြောသုတ်သင်လိုက်ပေမယ့် မျက်ဝန်း၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး အခန်းကို သင်ဆေးကြောခြင်း ပြုမိပါသလား။ မျက်ဝန်းနှစ်စုံ ပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ သင် တစ်စုံတစ်ရာကို ကြည့်ရတော့မည်။ ထိုအကြည့်များ၏ နက်ရှိုင်းမှု၊ အရေးပါမှုကို သင် စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်ဖူးပါသလား။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သင်သည် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က လူများကို ကြည့်နေရသည်။ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အရာဝတ္ထုများကို ကြည့်နေရသည်။ ထိုအကြည့်များဖြင့် သင့်ဘ၀ ရပ်တည်ချက်များ၊ သင့်အနာဂတ်ဘ၀များကို သင်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာကို သင် စဉ်းစားမိပါသလား။
သင့်နှလုံးသား အတက်အကျ အနိမ့်အမြင့် လှုပ်ရှားမှုများသည် သင့်မျက်ဝန်း အကြည့်များမှ တစ်ဆင့်၊ အဆင့်ဆင့် ပြုပြင်စေခိုင်းနေသည်ကို သင် သတိပြုမိလျှင် အကြည့်များ၏ အရေးပါမှုကို သင် သတိထားနေမိလိမ့်မည်။ “လျှပ်တပြတ်ကြည့်တယ်။ (ဖာသိဖာသာ) နမော်နမဲ့ကြည့်တယ်။ အကြည်ဆိုက်တယ်။ စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်တယ်။ စောင်းကြည့်တယ်။ ဒဲ့(တည့်တည့်)ကြည့်တယ်။ မကြည်ကြည့် ကြည့်တယ်။ မိုက်ကြည့်ကြည့်တယ်။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ကြည့်တယ်။ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ကြည့်တယ်။ ခါးခါးသီးသီး ကြည့်တယ်။ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ကြည့်တယ်။ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ကြည့်တယ်။ ….. ကြည့်တယ်။ ….. ကြည့်တယ်”။ သင် ကြည့်နေမိခဲ့သော အကြည့်များ ဖြစ်ပါသည်။ သင် ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ သင် ဆက်လက် ကြည့်ရအုံးမည်။ သို့ရာတွင် ထိုအကြည့်များကြောင့် သင့်နှလုံးသားလေး ဖြစ်သို့ ဖြစ်သွားခဲ့သည်ကို သင် သတိပြုမိဖူးပါသလား။
သင့်အနေနှင့် လူတစ်ယောက်ကို ကြည်ကြည်နူးနူး ကြည့်ဖူးမှာဖြစ်သလို ခါးခါးသီးသီးလည်း ကြည့်ဖူးလိမ့်မည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် သင့်အကြည့်များက တစ်ခါတစ်ရံ စိမ်းကားနေမှာဖြစ်သလို တစ်ခါတစ်ရံ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေလိမ့်မည်။ သင့်မျက်ဝန်းများကြောင့် သင့်မျက်နှာ လှပနေတတ်သလို သင့်မျက်ဝန်းများကြောင့်ပဲ ရုပ်ဆိုးအကြည်တန်နေလိမ့်မည်။ အကြည့်များက သင့်မျက်နှာပုံရိပ်၊ သင့်မျက်နှာက အရေးအကြောင်းများကို ဖန်တီးနေသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် သင့်နှလုံးသား၏ မွန်းကြပ်မှု၊ လွတ်လပ်မှု တစ်ခုခုကို ဖြစ်စေလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင် အကြည့်များ ကွဲပြားနေပါစေ၊ ယေဘုယျ ခွဲခြားလိုက်လျှင် နှစ်မျိုးသာ ရပါလိမ့်မည်။ အေးချမ်းသောအကြည့်နှင့် ပူလောင်သောအကြည့်။ ဤကဲ့သို့ အကြည့်များ၏ အနှစ်သာရကို သင်ခွဲခြားသိပြီဆိုလျှင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်၏ အကြည့်များကို သင်သတိပြုနေပါလိမ့်မည်။ မိုးလင်းပြီဆိုသည်နှင့် သင့်အခန်းအပေါ်က မျက်နှာကျက်ကို သို့မဟုတ် ခြင်ထောင်မိုးကို သို့မဟုတ် သင့်အိပ်ယာနှင့် အနီးဆုံးတစ်စုံတစ်ရာကို သင်ကြည့်မိလိမ့်မည်။ ထိုသို့ ကြည့်လိုက်သောအခါ ခံစားလိုက်ရသော ခံစားမှုကို သင် ဘယ်နှစ်ကြိမ် သတိပြုကြည့်ရှုဖူးပါသနည်း။
မျက်ဝန်းနှစ်စုံ ပွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ သင့်ခေါင်းထဲသို့ မကြာခင် ကြုံတွေရတော့မည့် အခက်အခဲများကိုသာ မြင်ယောင်ပြီး ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှ အကြည့်များ၏ ကျေးဇူးကို သင် ဥပေက္ခာပြုနေမိပါလိမ့်မည်။ သင် မျက်နှာသစ်သောအခါ၊ သင် မနက်စာ စားသောအခါ၊ သင် အိမ်ရှင်မကို သားသမီးများကို နှုတ်ဆက်သောအခါ ……….သင့် အလုပ်ခွင်မှ သူငယ်ချင်းများကို တွေ့သောအခါ …… သင် အလုပ်ဆင်း၍ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို နှုတ်ဆက်သောအခါ ….. သင် အိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ …..သင့် ဇနီးကို တွေ့သောအခါ …. သင် တီဗွီ ကြည့်သောအခါ ….သင် အိပ်ယာဝင်သောအခါ ….နေ့တစ်နေ့၏ နိစ္စဓူဝ ကိစ္စများကို သင့်အကြည့်များဖြင့် လုပ်ဆောင်နေရသည်ဟု ဆိုသောအခါ သင်အနေဖြင့် မထူးဆန်းဟု ဆိုနိုင်ကောင်းသော်လည်း ထိုအကြည့်များနှင့် သင့်စိတ် ဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက် အတူရှိခဲ့ဖူးပါသလဲဟု မေးလျှင် သင့်အနေနှင့် ငုတ်တုတ်မေ့သွားနိုင်ပါသည်။
သင် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကြည့်ခဲ့သော သင့်အကြည့်များနှင့်အတူ “အေးမြခြင်းနှင့် ပူလောင်ခြင်း”နှစ်ခုအနက် ဘယ်အရာဖြင့် ကြည့်နေခဲ့သည်ကို သင် အမှတ်ရပါသလား။ ထိုမေးခွန်းကို သင် နက်နက်နဲနဲ တွေးမိပြီဆိုလျှင် သင့်အကြည့်များနှင့်အတူ သင်ရှိနေသင့်သည်ဟူသော အတွေးတစ်ခု ရကောင်းရသွားပေလိမ့်မည်။
သင့်အကြည့်များနှင့်အတူ ပစ္စုပ္ပန်တည့်တည့်မှာ သင့်စိတ်ကို ထားနိုင်ပြီဆိုလျှင် “အေးမြခြင်းနှင့် ပူလောင်ခြင်း”နှစ်ခုအနက် ဘယ်အရာကို သင် ရွေးချယ်လိမ့်မည်နည်းဟု စဉ်းစားနေတော့မည်မဟုတ်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ သင့်အိမ် တံခါးပေါက်ကို စောင့်ဖို့အတွက် ဒရမ်ဝမ် ငှါး၍ရနိုင်သော်လည်း သင့်မျက်လုံးကို စောင့်ကြပ်ဖို့ကား သင့်စိတ်သာလျှင် ရှိပါသည်။
သင့်အနေနှင့် ပုထုဇဉ်လူသားဖြစ်၍ အမြဲထာဝရ စောင့်ကြပ်နိုင်မည် မဟုတ်သော်လည်း ကြည့်ဆဲခဏမှာ သိလိုက်ရခြင်းအတွက် အကျိုးကျေးဇူး မည်မျှ ကြီးမားသည်ကို သင်အနေနှင့် စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့ သင့်ကို တိုက်တွန်းချင်ပါသည်။ သင့်မျက်ဝန်းရှေ့က အကြည့်ခံအရာက အေးမြသောအရာဖြစ်နေသော်လည်း သင့်အနေနှင့် သတိမပြုမိလျှင် ထိုအေးမြမှုကို သင်ခံစားရဖို့ မလွယ်ကူပါ။
အေးမြမှုကို ခံစားရသည်ဟုဆိုသော် သတိမပါဘဲ အေးမြမှုကို မည်သို့မျှ မရနိုင်ပါဟု ဆိုလျှင် ငြင်းမည့်သူ ရှိမည် မထင်ပါ။ သတိပြုကြည့်ခြင်း၏ အကျိုးထူးတစ်ခုမှာ သင်ကြည့်သောအရာက ပူလောင်စရာဖြစ်နေသော်လည်း သင်က သတိကလေးဖြင့် ကြည့်နိုင်လျှင် ထိုပူလောင်မှုက သင့်ရင်တွင်းသို့ ရောက်မလာနိုင်သဖြင့် သင့်အနေနှင့် အေးမြမှုကိုသာ ခံစားရပေလိမ့်မည်။
စာစကားဖြင့်ဆိုရလျှင် မေတ္တာကြည့်၊ ကရုဏာကြည့်၊ မုဒိတာကြည့်၊ ဥပေက္ခာကြည့်များ ဖြစ်ဖို့ လိုပါသည်။ လောကစကားဖြင့် ပြောရလျှင် နားလည်မှုဖြင့် ကြည့်ခြင်းဟု ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ထိုအကြည့် သို့မဟုတ် ထိုနားလည်မှုကို ရဖို့ကလည်း သတိဖြင့် ကြည့်ခြင်းဟူသော နည်းတစ်နည်းသာ ရှိပါသည်။ မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ “ဧကာယနော အယံ ဘိက္ခဝေ မဂ္ဂေါ သတ္တာယ ၀ိသုဒ္ဓိယာ = ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် ဒီ (သတိ) တစ်လမ်းပဲ ရှိတယ်”ဟု မြွတ်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤစကားက မည်မျှ မှန်ကန်ကြောင်း လူပြောသူပြော များသော်လည်း သင့်အနေဖြင့် လက်တွေ့ သတိမထားသရွေ့တော့ အဓိပ္ပာယ်တစ်စုံတစ်ရာ သိရှိနားလည်ဖို့ ဖြစ်နိုင်လိမ့်အုံးမည် မဟုတ်ပါချေ။ အကြည့်များနှင့်သတိ ယှဉ်တွဲအောင် သာမန်လေးမျှ အားထုတ်နိုင်ပြီဆိုလျှင် ဒီထက် ပိုလွန်သော သတိကျင့်စဉ်များက သင့်ကို စောင့်ကြိုနေလိမ့်အုံးမည်။ မည်သည့်အရာကို ကြည့်ကြည့် ကြည့်စ၊ ကြည့်ဆဲ၊ ကြည့်ဆုံး…သုံးဌာနစလုံး သတိကပ်နေနိုင်ပြီဆိုလျှင် ဘ၀လွတ်မြောက်မှုပန်းတိုင်ဆီ နီးကပ်လာနိုင်ပေလိမ့်မည်။
အခု စာရေးနေစဉ်မှာ ကွန်ပြူတာကို ကြည့်နေပါသည်။ ကွန်ပြူတာထဲမှ စကားလုံးများ ဆင့်ကာဆင့်ကာ ပေါ်နေသည်ကို ကြည့်နေပါသည်။ ထိုစကားလုံးများမှတစ်ဆင့် စာဖတ်သူများကို ကြည့်နေပါသည်။ ထိုအကြည့်များတွင် စာဖတ်သူကို အေးမြစေချင်သောစိတ်ဆန္ဒသာ ပါရှိသဖြင့် အေးအေးမြမြ ခံစားရပါသည်။
မိုးလင်းသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် လောကကြီးကို ချစ်သောမျက်ဝန်းများဖြင့် ထာဝစဉ် ကြည့်ရှုနိုင်သူဖြစ်ဖို့ ဆန္ဒပြုနေရပါသည်။ ကြည့်စ၊ ကြည့်ဆဲ၊ ကြည့်ဆုံး အားလုံးမှာ အသိရှိနေဖို့တော့ ကြိုးစားရပေအုံးမည်။
Posted by ashin kusalasami on December 11, 2010 1 comment:
ဦးဇင်း မနက်ဖြန် အားလားဘုရား။ အားပါတယ်။ အားရင်လေ တပည့်တော်တို့ဆီကို အလည်လိုက်ခဲ့ပါလား။ တပည့်တော်တို့ လာပင့်မယ်လေ။ နောက်တစ်နေ့ မနက်ခင်းမှာပဲ နယ်ကနေ အလုပ်လာလုပ်တဲ့ ကောင်လေးတွေ လာကြိုတယ်။ သူတို့ဆီမှာ တစ်ညလောက်နေပါဆိုတော့ နေလိုက်တယ်။ နီးနီးကပ်ကပ်နေကြည့်မှ တို့ ရွှေမြန်မာတွေရဲ့ ဘ၀က မလွယ်ပါလားဆိုတာ သိရတယ်။ ပတ်စပို့နဲ့ တရားဝင်အလုပ်လုပ်သူရော၊ တရားဝင် မဟုတ်သူတွေပါ အကုန်လုံးက မလေးရှားရဲတွေရဲ့ ရန်ကနေ မလွတ်နိုင်ကြဘူး။ တရားဝင်အလုပ်လုပ်သူတွေတောင်မှ အမျိုးမျိုး ခြိမ်းခြောက်ပြီး တစ်နည်းနည်းနဲ့ ပိုက်ဆံရအောင် တောင်းတတ်ကြတယ်။ အခုဆို စက်ရုံတွေကလည်း မြန်မာဆို ပိုကြိုက်ကြတယ်တဲ့။ ဒါကတော့ အားလုံးသိပြီးသားပါ။ မြန်မာဆိုတာ ခိုင်းကောင်းတယ်လေ။ အသင့်အတင့်လေး ရရင် ပြီးရော။ “ကိုယ့်မြန်မာမှာ ဒီလောက်လစာလေးကို တစ်နှစ်လုံး ရှာရတာဆိုတော့ မထူးပါဘူး၊ မြန်မာမှာနဲ့စာရင်တော့ ကောင်းပါတယ်”။ ဒါမျိုးလေးတွေ ပြောနေကျပဲ မဟုတ်လား။
မြန်မာဆိုတာ ခေါင်းဆောင်သာ မလုပ်တတ်တာ။ အထက်လူကြီးခိုင်းရင် တာဝန်ဆိုပြီး နင်းကန် ကုန်းရုန်းတတ်ကြတယ်မလား။ မြန်မာမှာပဲ ကြည့်လေ။ ဘယ်ခေါင်းဆောင်မှ ကြာရှည်စာရိတ္တကောင်းသွားတယ်ဆိုတာ မရှိဘူး။ ရှိတယ်ဆိုလည်း နည်းနည်းလေးရယ်။ ပထမပေါ်ထွက်လာခါစတော့ တကယ့်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပါပဲ။ နောက်ပိုင်းတော့ ရာထူး၊ အာဏာတွေ လုရင်း တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးသွားကြတာပါပဲ။ ဥပမာအနေနဲ့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အများကြီး လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုထုတ်ပြရရင်တော့ ဦးသိမ်းမောင်ကြီးပေါ့လေ။ သူက မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း အာဏာလုရင်းနဲ့ နာမည်ဆိုးကျန်သွားခဲ့တာပဲ။ ရွှေတိဂုံစတဲ့ ဘုရားစေတီတော်ရင်ပြင်တွေမှာ မျက်နှာဖြူတွေ ဖိနပ်မစီးဖို့ တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ထဲမှာ ရှေ့ဆုံးက ပါခဲ့တာပဲ။ ဒါနဲ့ပဲ သူ့ကို ပြည်သူတွေက ချစ်စနိုးနဲ့ “ဖိနပ်သိမ်းမောင်”လို့တောင် အမည်ပေးလိုက်ကြသတဲ့။
နောက် ဗိုလ်နေ၀င်း။ သူကလည်း ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင်ပဲ မဟုတ်လား။ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဆိုတာ နိုင်ငံအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ကြသူတွေပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမယ့် အာဏာကို မက်မောပြီး ဗိုလ်ကျစိုးမိုး သွားခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးသွားတာပဲ မဟုတ်လား။ ဒါက ဘာကို ပြနေသလဲဆိုတော့ မြန်မာတွေဟာ ခေါင်းဆောင်မလုပ်တတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အချို့ မြင့်မြတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေလဲ ရှိခဲ့တာပဲ မဟုတ်လား။ ရှိတာတော့ အများကြီးပေါ့။ ဥပမာအားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပေါ့။ သူဟာ ခေါင်းဆောင်ပီသတယ်ဆိုတဲ့ စကားထက်ကို ပိုလွန်တဲ့ ဂုဏ်ဒြဗ်တွေ ရှိနေတယ်။ သူလို ခေါင်းဆောင်မျိုးဟာ ရှာမှရှားတဲ့ အာဇာနည်ပဲ။ ဘုရားလောင်းစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိသူလို့ပဲ ဆိုလိုက်ချင်ရဲ့။
ခေါင်းဆောင်ကောင်းဆိုတာ အာဏာနဲ့စည်းစိမ်ကို မက်မောသူ မဟုတ်ဘူး။ အလုပ်လုပ်ဖို့သာ မက်မောနေသူဖြစ်တယ်။ အခု လက်ရှိ အမေစု။ သူသာ အနိုင်ကျင့်မယ်၊ စိတ်ရိုင်းဝင်မယ်ဆိုရင် ဒီအာဏာရှင်တွေ နေစရာတောင် ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ပြည်သူတွေရဲ့ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်နဲ့ လွတ်လပ်မှုသာ ရှေ့တန်းတင်ထားတယ်။ ပြည်သူတွေဟာ သူခိုင်းရင် ဘာမဆို လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပဲ။ ဒါပေမယ့် သူဟာ ပြည်သူတွေဆီက အများကြီး မတောင်းဆိုဘူး၊ ပြည်သူတွေအတွက် ပေးဆပ်နေလိုသူသာ ဖြစ်တယ်။ ထားပါတော့။ ပြောချင်တာက မြန်မာတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်ဟာ အတ္တတွေ များလွန်းတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုအကြောင်း စိတ်ကူးနေတုန်းမှာပဲ မေးခွန်းတစ်ခု မေးလာတယ်။ ဦးဇင်း လူထွက်အုံးမှာလား။ အင်း … ခုချိန်ထိတော့ စိတ်ကူး မရှိပါဘူးဗျာ။ ခုချိန် စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးဆိုတော့ နောက်ကျရင် ရှိလာမှာပေါ့လေ။ အဲ့လိုလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အရာမှ အတည်အမြဲ မရှိဘူး မဟုတ်လား။ မင်းတို့ကို ပြောရအုံးမယ်။ လူတွေလေ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စိတ်ထဲရှိတာ ပြောတဲ့ဘုန်းကြီးဆို လူတွေက သိပ်အထင်မကြီးတတ်ကြဘူး။ လူထွက်အုံးမလားဆို မထွက်ဘူး။ သာသနာ့အကျိုးကို ထမ်းဆောင်ချင်လို့ ၀တ်လာတာ ဘာညာနဲ့ အထင်ကြီးအောင် ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီး လုပ်သူဆို အတော်ထင်ကြီးကြတာပါပဲလား။ ဒါက ဒို့မြန်မာတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပဲ။ လူများ ကိုးကွယ်ရင် လိုက်ကိုးကွယ်။ သူများ ဆည်းကပ်ပြီဆို လိုက်ဆည်းကပ်။ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ဘာမှ စဉ်းစားမှု မရှိဘူး။ သမိုင်းမှာပဲ ကြည့်လေ။ ကိုးကွယ်သူများတဲ့ ကိုးကွယ်ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ နောက်ပိုင်းမှာ မဟုတ်တာတွေ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်ကုန်ကြတာပဲ မဟုတ်လား။ အားလုံးတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
စကားကောင်းနေတုန်း “ဦးဇင်း … ဒါက ဦးဇင်းထွက်၊ ၇-၀ါရမှ ထွက်လိုက်တာ”လို့ မိတ်ဆက်တယ်။ ဘာကြောင့် လူထွက်လိုက်တာလဲ။ တပည့်တော်ကတော့ တပည့်တော်နေတဲ့ ကျောင်းက ကုသိုလ်မရလို့ ဦးဇင်းရဲ့။ ကိုယ်က ကောင်းကောင်းမနေနိုင်တော့ ဘုန်းကြီးဘ၀ဆိုတာကို ကြောက်လာတာ။ အခုဟာက တပည့်တော်နေတဲ့ကျောင်းက ဘာပရိယတ်၊ ဘာပဋိပတ်မှ မလုပ်ကြဘူး။ ………။ …….။ (ထားခဲ့သော ၀ါကျများသည် -လူအလုပ်တွေ အကုန်လုပ်နေကြတာ-ဟူသော အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်သည်)။ တပည့်တော်ကတော့ စာသင်တိုက်တွေ၊ တရားစခန်းတွေ ဖွင့်ပေးနေတဲ့ ကျောင်းတွေနဲ့ ပရဟိတကျောင်းတွေလောက်ပဲ အထင်ကြီးတယ်။ ကျန်တဲ့ကျောင်းတွေတော့ …………။ ဒါကြောင့် တပည့်တော် ထွက်ခဲ့တာ။
ဟုတ်တယ်။ ငါ့လူ မဆိုးဘူး။ အဲဒီလို တွေးတတ်တယ်။ အခု ဒို့ဆီမှာက ပရိယတ်၊ ပဋိပတ်အလုပ်ဆိုတာကို ထည့်မထွက်ကြဘူး။ ဘုန်းကြီးမြင်ရင် အထင်ကြီး၊ အထင်ကြီးစရာ တကယ်မတွေ့၊ မကြည်ညိုစရာ စိတ်ဆိုးတွေကိုတွေ့တော့မှ “ဟာ ဘုန်းကြီးတွေ အလကားပါကွာ၊ ငါလှူလိုက်ရတာ အလကားဖြစ်ကုန်ပြီ”နဲ့ သာသနာမကောင်းကြောင်း လိုက်ပြော။ တကယ်ဆိုရင် အစကတည်းက အရင်းအနှီးဆိုတဲ့ အလှူတွေကို လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် သေသေချာချာ စဉ်းစားသင့်တယ်။ စီစစ်သင့်တယ်။ အခုတော့ ဘာမှ မစဉ်းစားဘဲ၊ မဟုတ်တာတွေဖြစ်တော့ ကိုယ့်အပြစ်ကို မမြင်။ သာသနာတစ်ခုလုံး မကောင်းတော့သလို ပြော။ တော်တော် အသုံးမကျတဲ့ လူမျိုးပါကွာ။
ငါ့လူတို့ တွေ့မိကြမယ် ထင်တယ်။ အင်တာနက်သုံးသူတွေဆို ပိုသိမယ်။ ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုမှာ နော်ဝေလား၊ ဆွီဒင်လား မသိဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောက်ချင်လို့ ဆိုပြီး မရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးတွေ ငွေစုကြ။ နောက်ဆုံးတော့ သူတို့ ရည်မှန်းထားတဲ့ ဘုန်းကြီးက ရှိတဲ့ ငွေကို အကုန်မ-ပြေး(ယူပြေး)သွား။ အဲဒီတော့မှ ဘုန်းကြီးတွေ မကောင်းကြောင်း ၀က်ဘဆိုက်တွေမှာ လိုက်ရေး။ ဖတ်ရတာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါပဲ။ တကယ်ဆိုရင် ဒီလောက် ကြီးကျယ်တဲ့ အလုပ်တစ်ခု လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒို့မြန်မာတွေအနေနဲ့ စနစ်တကျ အဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီး တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းကြောင့် ပျက်စီးမသွားရအောင် အရင် စီမံသင့်တာပေါ့။ အခုတော့ ကိုယ်ရည်ရွယ်တဲ့ဘုန်းကြီးက ဘာမှန်းမသိ၊ ညာမှန်းမသိ။ စာရိတ္တ ကောင်းမှန်းမသိ၊ ဆိုးမှန်းမသိ။ သင်္ကန်းဝတ်ထားတာတစ်ခုနဲ့ အကုန်ပစ်ယုံ။ ဖွတ်ထွက်လို့ တောင်ပို့မှန်းသိတော့မှ အရူးမီးဝိုင်းတွေ ဖြစ်။ မဆိုင်တာတွေ ဆက်ပြောကြ။ ဒီတော့ ဘာဖြစ်သလဲ ကိုယ့်လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံး စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်ရတယ်ပေါ့ကွာ။
“ဦးဇင်း န၀ကမ္မပါဘုရား”။ “ဘယ်လောက်လဲ”။ “၅၀-ပါ ဦးဇင်း”။ “မင်း လခ ဘယ်လောက်လဲ”။ “တပည့်တော် တစ်နေ့ကို သုံးဆယ်ပါ၊ အသုံးစရိတ်တွေ ဘာတွေ နှုတ်လိုက်တော့ တစ်နေ့ကို ၂၀-လောက်လို့ပဲ ပြောရမယ် ထင်တယ်”။ အေး…အခု ဦးဇင်း အခုလို ဘာကြောင့်မေးတယ်ဆိုတာ သိလား။ ဒို့ မြန်မာတွေ အလှူအတန်း မလုပ်တတ်လို့။ အလှူအတန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ စိတ်ချမ်းသာချင်လို့။ ကြွားချင်ဝါချင်လို့ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါလေးကို အရင် သိထားဖို့၊ သဘောထားတတ်ဖို့ လိုတယ်။ ဥပမာ ဒို့အရပ်တွေမှာဆို ပိုက်ဆံအလုံအလောက်မရှိဘဲ လယ်တွေယာတွေတောင် ပေါင်၊ ရောင်းလုပ်ပြီး လှူကြတယ်။ အလှူလည်းပြီးရော အကြွေးတွေ လည်ပင်းနစ်လို့။ ဘာစိတ်ချမ်းသာစရာမှ မရှိဘူး။ အလှူလုပ်တုန်းကတော့ အပေါင်းအသင်းတွေက ချကွာ။ ဘာလေး ကျွေးလိုက်၊ ညာလေး ကျွေးလိုက်၊ လုပ်မနေနဲ့ ချကွာလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ အကုန်လိုက်လုပ်ပစ်တော့တာ။ ကိုယ်လှူလိုက်တဲ့အလှူက သာသနာအတွက် ဘယ်လောက် အကျိုးကျေးဇူး ဖြစ်သွားသလဲ။ လိုအပ်နေသူအတွက် ဘယ်လောက် ၀မ်းမြောက်စရာတွေ ဖြစ်သွားလဲ။ ဒါတွေကို စဉ်းစားပြီး လှူတဲ့သူက နည်းတယ်။
အလှူမတတ်ရင် ငတ်တယ်ကွ သိလား။ ဒါကြောင့် ပီနန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက အမိန့်ရှိတယ်လေ။ “ဘုန်းကြီးတွေ ဟောဟောနေကြတာပဲ။ သံဃေ ဒိန္နံ မဟပ္ဖလံ= သံဃာကို လှူရင် အကျိုးကြီးတယ်တဲ့။ သံဃာလှူလို့ အကျိုးကြီးကြကြေးဆိုရင် ဒို့ မြန်မာတွေ ဘယ်မှာ ဆင်းရဲတော့မလဲ။ အခုတော့ မွဲလိုက်ကြတာ ဖွတ်ဖွတ်ကို ကြေလို့”တဲ့။ သံဃာဆိုတာကို နည်းနည်းချဲ့ကြည့်ဖို့ လိုတယ်။ သံဃာဆိုတာ အသင်းအဖွဲ့၊ အစုပဲ။ ဘုရားရှင်လက်ထက်ကတော့ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကြီးက ဒီနေ့ခေတ် သံဃအဖွဲ့အစည်းနဲ့ မတူတော့ဘူးလေ။ ဒါကိုလည်း ကြည့်ရတယ်။ ပြောစရာတော့ အများကြီးပဲ။ အကျဉ်းချုံးပြောရရင် ကိုယ့်အလှူကို လက်ခံမယ့်သူကို ဆန်းစစ်ရတယ်။ ကိုယ်လှူမယ့်အဖွဲ့အစည်းကို ဆန်းစစ်ရတယ်။
တစ်ခါတလေ တွေ့နေရတာပဲ။ ဘာအတိုင်းအဆမှ မရှိဘဲ လှူဒါန်းနေကြသူတွေလေ။ ဘုရားရှင်က ဥစ္စာပစ္စည်းကို လေးဖို့ ခွဲပြီး သုံးရမယ်တဲ့။ တစ်ရက်က ဦးဇင်း တရုတ်တွေကို ဒါဟောတာ။ သူတို့က ပြောတယ်။ ငါတို့ ဘုရားက ဒီလောက်တောင် အသေးစိတ် ညွှန်ကြားခဲ့သလား၊ ငါတို့ မကြားဖူးဘူးတဲ့။ သူတို့ အတော်ဝမ်းသာသွားကြတယ်။ ကိုယ့်ဝင်ငွေကို နေ့စဉ်သုံးဖို့ တစ်စု၊ နေ့စဉ် စီးပွားရေးအတွက် တစ်စု၊ အလှူလုပ်ဖို့ (ဘုန်းကြီးကို ပေးမှ မဟုတ်ဘူး၊ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကို ကူညီလှူဒါန်းတာလည်း ပါတယ်) တစ်စု၊ အကြောင်းရှိရင် သုံးဖို့ တစ်စုဆိုပြီး လေးစု ခွဲရမယ်တဲ့။ စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ ဘယ်လောက် စနစ်ကျလဲလို့။ ကိုယ့်ဟာကို စဉ်းစားကြပေါ့။
အခုတော့ ဒို့မြန်မာတွေက စနစ်မကျဘူး။ အလှူအတန်းတွေ နင်းကန်လုပ်နေသူတွေကိုလည်း အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးမှ ပြော။ အချို့က မြှောက်ပေးကြတယ်။ တော်တော် အလှူအတန်း ရက်ရောတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့လေ။ သူများလည်း သွားမမြှောက်နဲ့။ ကိုယ်တိုင် လှူပြီဆိုရင်လည်း စောစောက မြတ်စွာဘုရား ညွှန်ကြားခဲ့တဲ့ လေးဖို့ကို စဉ်းစား။ ခြွင်းချက်တွေတော့ ရှိနေအုံးမှာပေါ့။ ဒါတွေတော့ ပြောဖို့ အချိန်မရဘူး။
ဆရာကြီး လုပ်ချင်လို့ ဒါတွေ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ ဒို့မြန်မာတွေ စနစ်မကျတာတွေ များလွန်းလို့၊ အခုဆို ငါ့လူတို့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ အလုပ်ကို ကြိုးစား၊ ပိုက်ဆံကို စု၊ စုနိုင်မှ ငြိမ်းချမ်းမယ်ဆိုတယ် မလားကွ။ အခုဆို ရည်ရွယ်ချက်ပျောက်ပြီး ပြည်ပမှာ ပျက်စီးနေတဲ့ ဒို့မြန်မာတွေ တွေ့ရတာ စိတ်မကောင်းလွန်းလို့ ပြောလိုက်ရတာပါ။
Posted by ashin kusalasami on December 08, 2010 1 comment:
Posted by ashin kusalasami on December 05, 2010 1 comment: